Uhambo lweFektri | I-Xiamen Emva kokuprinta ukuGqibezela iiMpahla kwiZiko.
Abavelisi beFilimu abaSombathayo
Ngeso lenyama wokulaminetha yoMvelisi
ICorona L yenza ulungelelwaniso lwefilimu
Umthengisi weFilimu wokuLaminetha oQengqelekayo
Jumbo Roll wokulaminetha Film
Umlinganiso woLungelelaniso olwenziwe ngokwezifiso
Isantya esiphezulu semigca yokupeyinta i-extrusion yokuvelisa ifilimu yokuthambisa i-thermal nge-850MTs umthamo ngenyanga.
Icandelo eliphambili lobuchwephesha ekuqinisekiseni ubukhulu bokulinganisa kunye namandla okubambelela aphezulu.
ICorona iphathwe i-laminate roll, i-corona engatshatanga okanye ephindwe kabini enexabiso ukuya kwi-dynes ezingama-52.
Ukurola ngokugqwesileyo kunye nokubuyisela umva ifilimu ye-BOPP yeLram yokuLaminetha.
I-jumbo roll laminating flm spplier, i-fim ye-laminating fim, i-glossy kunye ne-mat, amanyathelo afanelekileyo
Imiqengqwana yeMat enokwenziwa ngokobubanzi nobude.
I-Xiamen emva kokuprinta ukuGqiba iiMpahla Co, Ltd Ukuza kuthi ga ngoku izabelo zibambe imigca yesibhozo yokuqhekeza i-extrusion kunye noomatshini abalishumi abalungisiweyo abahlanganiselwe ukuvelisa umqulu weplastiki weefilimu zokulaminetha ezishisayo, ukhupha i-750MTs ngenyanga.
Ukuze kuqinisekiswe ukukhonza ifilimu esemgangathweni yokugcoba i-laminating, imigca yethu ye-extrusion ixhotyiswa ngezona ndawo ziphambili zobuchwephesha ziqinisekisayo eziqinisekisa ukutyeba okungaphezulu kokulinganisa kunye namandla aphezulu wokubambelela.
Ixesha elininzi, ngaphambi kokuba siphinde sibuyele umva okanye sityibilike, ii-rolls zethu ezilaminethiweyo zomile usuku olunye emva kokuba zigqutywe yiglu ye-EVA. Le nkqubo yomeleza ixabiso lokubambelela kwaye yenza ukuba i-laminate yeplastiki ihambe ngokugudileyo ngelixa inciphisa ukuma.
Olunye ulwazi malunga ne-thermal lamination, yinkqubo yokwenza i-lamination ngokwenza i-laminates ngenxa yesiphumo sobushushu. Sikwabiza ngokuba bubushushu okanye lamination eyomileyo. Ezi bhanyabhanya zokulaminetha zenziwa ngenkqubo yokutyabeka ekuthiwa yi-extrusion kwaye kwelinye icala lobushushu bhanyabhanya obunobuntununtunu obunqabileyo benziwe, ubukhulu becala yi-BOPP + EVA okanye i-PET + EVA.
Wokulaminetha Thermal udlula roll eshushu okanye laminator. Kuya kufuneka sisebenzise uxinzelelo olufanelekileyo kwaye kwenziwa i-lamination. Lamination eyomileyo iya iluncedo ngakumbi ngenxa yeenzuzo zayo zokulaminetha okumanzi. Akudingeki ukuba sisebenzise enye into yokuncamathelisa ukuze uthambise.
Ngaba unomdla koku kungasentla?
Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi:
Izitampu ezishushu, Hot ngefoyile ye, Hot Ukunyathela Ukunyathela, ifilimu yokushisa ubushushu, Abavelisi beefilimu ze-bopp zesinyithi, ipholiyesta ifilimu,